Torolàlana momba ny fividianana | Pharmacy RXS
Aprily 17, 2020 2020-04-17 2:18
1 Vola ekena
2 Fisoratana anarana kaonty
3 Politikan'ny mpikambana
4 Ahoana ny fomba hividianana làlana?
5 Kara-trosa ekena
6 Maninona no mividy ny làlanay?
Ny vidin'ny fampianarana rehetra dia amin'ny dolara amerikana. Manaiky ny fandoavam-bola amin'ny dolara amerikana izahay, mandritra izany fotoana izany, ny vola lehibe hafa dia azo atao, saingy ny habetsaky ny vola dia miova arakaraka ny tahan'ny fifanakalozana kendrena sy ny politikam-ketra isaky ny firenena.
Fisoratana anarana kaonty
Raha te hividy taranja rehetra na ho lasa mpikambana ao amin'ny ivonay dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny kaonty manokana aloha ny mpanjifa / mianatra:
Daty nahaterahana (takiana)
Passport / ID No. (takiana)
Asa ankehitriny (takiana)
Laharana finday (takiana)
Adiresy mailaka (takiana)
Fialamboly sy tombontsoa (tsy voatery)
Mombamomba ny sosialy (tsy voatery)
Vantany vao voasoratra anarana ho mpikambana ao amin'ny foibe misy anay ny mpampiasa, dia afaka miditra amin'ny kaontin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra izy ireo mba hankafy lesona maimaimpoana sy mahasoa an-jatony. Rehefa mividy taranja iray izy ireo dia homena isa ny kaontiny. Ireo teboka ireo dia hangonina ho mpampiasa laharana eo amin'ny rafitra mpikambana ato aminay. Ny ambaratonga tsirairay dia omena valisoa amin'ny tombony sy fihenam-bidy samihafa.
Azonao atao ny manamarina ny haavon'ny maha-mpikambana anao Eto.
Ahoana ny fomba hividianana làlana?
Tsindrio ny bokotra Buy this course, avy eo omeo ny mombamomba ny carte de crédit anao hamita ny fividianana. Raha nisafidy ny hitahiry an'ity fampahalalana ity ianao dia ho fenoina ho azy ianao raha hanohy ny fizahana amin'ny tsindry 1 fotsiny.
* Ny haba dia alaina amin'ny banky sy ny toerana misy anao.
Maninona no mividy ny làlanay?
Ny atiny nohavaozina tsy tapaka
Ny fandoavam-bola azo antoka sy tsy misy olana
Fidirana mora & dashboard ho an'ny mpampiasa marani-tsaina